မရှိမဖြစ်ရေနံကားပျံ့, မော်တော်ကားပျံ့, မော်တော်ကားအနံ့ပျံ့တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. ကမ်းလှမ်းရန်
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံကားပျံ့,ကားတစ်စီးပျံ့,ကားတစ်စီးအနံ့ပျံ့,usb ကားပျံ့,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ကားတစ်စီးပျံ့
ကားတစ်စီးပျံ့ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံကားပျံ့, ကားတစ်စီးပျံ့ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ကားတစ်စီးအနံ့ပျံ့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
USB Port ပလပ်စတစ်အသေးစားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Car Diffuser
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများအတွက် 2ML အကောင်းဆုံးအိမ်သုံးပျံ့
အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း 5V ရနံ့ကုထုံး Car Oil Diffuser
ရနံ့ကုထုံးအဆီများအတွက် 10ml အကောင်းဆုံးပျံ့
USB Car Aroma မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Ultrasonic ပျံ့
Car Oil ရေမွှေးပျံ့နှံ့သစ်သားရေမဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ
Desktop Usb ရေမရှိသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီမွှေးပျံ့နှံ့မှု
ခရီးဆောင်ရေမရှိသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Nebulizing Diffuser
Wood က Usb အနံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ကား
Car Usb Diffuser မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ
Car Mini Usb Fan မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ diffuser ရေမရှိ
Target Walmart Amazon မှကားရေနံပျံ့
RoHS လက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့် Car Oil Diffuser Uk Australia၊
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများအတွက် USB Car Diffuser ရနံ့ကုထုံး
USB port Multi Function ကား Utrasonic အနံ့ပျံ့
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှု USB မော်တော်ကားရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့
Mini ကိုကား Air ကို Humidifier မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့
ဂန္ထဝင် Wood ကအနံ့မရှိမဖြစ်ရေနံကားပျံ့
USB Port ပလပ်စတစ်အသေးစားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Car Diffuser သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအသက်ရှူစေသောအမွှေးအကြိုင်ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်ဤသေးငယ်သောပျံ့နှံ့မှုသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးသောနေ့မှ စ၍ စိတ်ဖိစီးမှုများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှမီးခိုးနှင့်ဆိုးရွားသည့်အနံ့များကိုဖုံးအုပ်ပေးသည်။ Whisper-Quiet Ultrasonic...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများအတွက် 2ML အကောင်းဆုံးအိမ်သုံးပျံ့ ကားရနံ့ကုထုံး။ ကား၏လေသန့်စက်သည်ကားအတွင်းရှိ formaldehyde ကဲ့သို့သောအန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့များကိုသာဖယ်ရှားပေးသည်၊ သို့သော်ကားအတွင်းရှိအနံ့များကို ပို၍ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့။...
အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း 5V ရနံ့ကုထုံး Car Oil Diffuser ၎င်းသည်ကားပိုင်ရှင်အသစ်လား၊ နှစ်ပေါင်းများစွာမောင်းနှင်လာခဲ့သည့်မောင်းသူဟောင်းလားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကားအတွင်းရှိအနံ့သည်ကားပိုင်ရှင်များအတွက်အခက်ခဲဆုံးပြoneနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကားအသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကားစက်ရုံမှထွက်ခွာသွားသောကားများသည်အလွန်လေးလံသော၊...
ရနံ့ကုထုံးအဆီများအတွက် 10ml အကောင်းဆုံးပျံ့ ကားခွက်ကိုင်ဆောင်သူသည်အရွယ်အစားသေးငယ်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးသင့်ကားအလှဆင်မှုကိုအဆင်ပြေစေပါသည်။ Desktop ကတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ ကြော့ရှင်းသောအသွင်အပြင်နှင့်ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်းဖြင့်စားပွဲပေါ် တင်၍ အနံ့ခံနိုင်သည်။ (Dituo ထုတ်ကုန်များ: Ultrasonic ပျံ့နှံ့, သစ်သားအစေ့ပျံ့, စမတ်ပျံ့နှံ့,...
USB Car Aroma မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Ultrasonic ပျံ့ အမွှေးအကြိုင်သည်စိုထိုင်းဆတိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးသင့်အားကျန်းမာသောအသက်ရှူနိုင်သောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပေးသည်။ အိမ်၊ ရုံး၊ ကားနှင့်အခြားမြင်ကွင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအရွယ်အစားသေးငယ်။ စတိုင်ကျလှပပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီးလတ်ဆတ်သော၊ ဆူညံသံနည်းသောစိုထိုင်းဆ၊ အိမ်တွင်း၌ ၃၅...
Car Oil ရေမွှေးပျံ့နှံ့သစ်သားရေမဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ ဒီတနင်္ဂနွေမှာမင်းနဲ့အတူစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဖတ်မယ်။ ရှားရှားပါးပါးတနင်္ဂနွေနေ့များတွင်၊ သင်ကိုယ်တိုင်ဆန့်ထုတ်ပါ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောစာအုပ်ကိုဖွင့ ်၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောကမ္ဘာကိုရှာဖွေရန်အမွှေးနံ့သာနှင့်အတူပါရှိသောဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။ နေ့လည်ခင်းမှာအနားယူပါ။...
Desktop Usb ရေမရှိသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီမွှေးပျံ့နှံ့မှု အနံ့၏မှတ်ဉာဏ်သည်သင်၏နေရာတစ်ခုလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ အနံ့သည်လေနှင့်တူပြီးအနံ့တစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသည့်မှတ်ဉာဏ်ရှိသည်။ အရသာတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝမှတ်ဉာဏ်တွင်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွေးမွေးနိုင်သည်။...
ခရီးဆောင်ရေမရှိသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Nebulizing Diffuser မတူညီသောရနံ့ကုထုံးစက်၊ မတည်ငြိမ်သောစက်ရုံမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီအရည်၊ မွှေးကြိုင်သော၊ လမ်း၊ ရုံး၊ အိမ်၌သက်သောင့်သက်သာရှိသောခံစားမှုတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စွာခံစားကြည့်ပါ။ သင်နှင့်အတူလိုက်ပါရန်၊ ကားထဲတွင်ထူးခြားသောအနံ့များကိုဖယ်ရှားရန်၊...
Wood က Usb အနံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ကား ခရီးတိုင်းပျော်ရွှင်ပါ။ အလင်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူသင်သည်သဘာဝမှ ဖြတ်၍ သွားလာရသည့်အလားအမွှေးအကြိုင်ခရီးကိုစတင်မောင်းနှင်နိုင်သည်။ မျိုးစုံသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုပါ။ မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၊ မတူညီသောရနံ့အမျိုးအစားများသည်မတူညီသောလေထုအတွက်သင့်တော်သည်။...
Car Usb Diffuser မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ နူးညံ့သောကုမ္ပဏီ၊ သင်၏အာကာသ၊ နံ့သာမျိုး၊ ဆူညံမှုပျံ့နှံ့သောအမွှေးနံ့သာ၊ ဆိတ်ငြိမ်သောကုမ္ပဏီ၊ သင့်ကိုအဖြူမှညမှနောက်သို့ခေါ်သွားပါ။ သာယာသောတတိယနေရာဖန်တီးပါ။ သင့်အတွက်လုံခြုံပြီးသာယာသောအတွင်းပိုင်းနေရာဖန်တီးရန်ရေခွက်အရွယ်အစား၏ဒီဇိုင်းကိုလက်မောင်းခတ်ကိုင်ဆောင်သူတွင်ထည့်နိုင်သည်။...
Car Mini Usb Fan မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ diffuser ရေမရှိ Waterless Diffuser သည်သန့်ရှင်းပြီးလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏အိမ်၊ ကားသို့မဟုတ်ရုံးတွင်အသုံးပြုရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုသည်။ ရေမရှိရေနံပျံ့သည်ရေသို့မဟုတ်အပူကိုမသုံးဘဲစင်ကြယ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုပျံ့နှံ့စေသည်။ အရောင်သစ်သားစပါးကိုဖြစ်ပါတယ်။...
Target Walmart Amazon မှကားရေနံပျံ့ သန့်ရှင်းသောသဘာဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုလေထဲသို့ထုတ်လွှတ်ပါ။ ၎င်းသည်သဘာဝအားဖြင့်သဘာဝအမွှေးအကြိုင်တစ်ခုနှင့်ဝန်းရံနေသည်ဟုခံစားရရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ဒီပျံ့နှံ့အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်နှင့်အသွင်အပြင်ကဲ့သို့ဖက်ရှင် spa ပေးပါသည်။...
RoHS လက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့် Car Oil Diffuser Uk Australia၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Diffuser nebulizer Mini ကိုခေတ်မီဖန်ခွက်အိတ်ဆောင် Aromatherapy ပျံ့နှံ့ Wireless & Waterless Auto Off Nebulizing usb အားပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီသည်ကားအိမ်သုံးပါတီအတွက်မွှေးပျံ့သောပျံ့နှံ့သူဖြစ်သည်။ IR WIRELESS & PORTABLE 】 —— ဤ...
Car Diffuser Essential Oils Walmart Lazada Ebay အဆိုပါအနံ့ Diffuser ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည် သငျသညျအကြီးအအနံ့အာကာသနှင့်ဝမ်းမြောက်သောအနံ့ခံစားမှုဆောင်ကြဉ်းနိုင်ချင်ပေမယ့်သင်ကအခက်အခဲမရှိဘဲသဘာဝကျကျသင့်ရဲ့အခန်းပေါင်းရနံ့ဖို့နည်းလမ်းရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ သင်အသက်ရှူနေသည့်အရာကိုအတိအကျသိသင့်သည်။...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများအတွက် USB Car Diffuser ရနံ့ကုထုံး Nebulizer: အစွမ်းထက် Waterless ပျံ့ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း သန့်ရှင်းသောရနံ့ကုထုံးနှင့်လက်ဆောင် Nebulizing diffuser သည်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောပျံ့နှံ့နိုင်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ 100% မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ၏ကုထုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်း။...
အစိမ်းရောင်အရောင်အကောင်းဆုံးအိမ်သုံးရနံ့ပျံ့နှံ့စေသောဆီ [သင်၏ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပါ] - အသေးစားပျံ့နှံ့ခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၏ ၂ မီလီမီတာအထိသိုလှောင်ထားနိုင်ပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိသောနေထိုင်မှုပတ် ၀ န်းကျင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ [အိတ်ဆောင်အရွယ်အစားနှင့်အိတ်ဆောင်ပျံ့နှံ့ခြင်း] - ကားပျံ့နှံ့ခြင်း၊...
USB port Multi Function ကား Utrasonic အနံ့ပျံ့ အဘယ်သူမျှမ dilution - you`ve အစဉ်အဆက်က လာ. , ပြီးတော့သူကရေဖြည့်စွက်ပြီးနောက် diffused ခဲ့သည်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရောစပ်ပုလင်းသွပ်ဖန်ခွက်ထဲမှာသင်အကြိုက်ဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီတွေထဲကရောစပ်လျှင်, သင်ကအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအနံ့သတိပြုမိကြပေမည်။...
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှု USB မော်တော်ကားရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Excel ကုထုံး: ရနံ့မှေးမှိန်ဖို့ရေမရှိသော, အကုထုံး, BPA အခမဲ့ပစ္စည်းကိုပြောင်းလဲ NO အပူ, စင်ကြယ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Atom, သင်အများဆုံးစင်ကြယ်သောရနံ့ကုထုံများကျန်းမာရေးနှင့်အများဆုံး efficent mothod ခံစားနိုင်။ USB မှတ် & အဆင်ပြေ: usb...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 10 - 9.69 / Piece/Pieces
Mini ကိုကား Air ကို Humidifier မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ ကားတစ်စီးပျံ့ကွဲပြားခြားနားသော cars` ခွက်ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ဿုံကိုက်ညီသောကားများများအတွက်ခရီးသွား-ဖော်ရွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစသင့်ကားရွေ့လျားနေစဉ်ပြုတ်ကျကာကွယ်ထားတဲ့သီးသန့်ဒီဇိုင်းတပ်ဆင်ထားတစ်ဦးငြိမ်းချမ်း room.The usb ပျံ့သို့တစ်ဦး ultrasonic...
ဂန္ထဝင် Wood ကအနံ့မရှိမဖြစ်ရေနံကားပျံ့ 100% သန့်စင်သောမရှိမဖြစ်ရေနံ Nebulizing ပျံ့ဆိုင်းငံ့မိုဃ်းတိမ်သည်အခိုးအငွေ့, 100% Atom, heatless, လှငျရနံ့ကုထုံဖန်တီးပေးပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံဖြုန်း။ ကြံ့ခိုင်သစ်သားဖွဲ့စည်းပုံ, သစ်သားပျံ့ကျဆင်း, စူပါတိတ်ဆိတ်,...
တရုတ်နိုင်ငံ ကားတစ်စီးပျံ့ ပေးသွင်း
DITUO နယူးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူကို USB မရှိမဖြစ်ရေနံကားပျံ့ 100% PP ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ကားအတွက်လတ်ဆတ်သော, အစိုဓာတ်နှင့်အနံ့အခမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ USB မှတ် powered, သင့်ကားထဲတွင် plug ကို, မော်တော်ကားပျံ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုယူခံရဖို့ခရီးဆောင်သည်နှင့်မဆိုမော်တော်ယာဉ်ခွက်ကိုကိုင်ဆောင်သူမှဿုံကိုက်ညီ။ နှစ်ဦးအားအလုပ်လုပ်ကိုင် Modes သာ, စဉ်ဆက်မပြတ်အခိုးအငွေ့ mode နဲ့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအခိုးအငွေ့ mode ကို။ ကားမောင်းနေစဉ်မောပန်းခြင်းမှသက်သာရာရစေရန်လှပသော7အရောင်များစိတ်ဓါတ်များအလင်း။ သင်ရုံအလင်းမရှိဘဲ usb ကားတစ်စီးပျံ့သုံးပြီး၏ထို option ရှိသည်။ ရေကိုအစားအလွယ်တကူခြိုးဖောကျတဲ့ကြာကြာအလုပ်လုပ်ဘဝကိုသေချာစေရန်အနိမ့်ရေလိုင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခါကအလိုအလျောက်ပိတ်။
အဆိုပါ USB ပါဝါအရင်းအမြစ်ဒီဟာအလွန်စွယ်စုံပျံ့စေသည် - သူကဘယ်နေရာမှာမဆို there`sa က USB port ကိုသုံးနိုင်တယ်။ သင်သည်သင်၏ရုံးခန်းထဲမှာသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုစ plug နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တောင်ဟိုတယ်အခန်းထဲသို့ကို ယူ. မီးခွက်ပေါ်ခဲ့ကွောငျးကို USB port ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာ (မယ့်ကားကိုများအတွက်) တစ်ဦးကြံ့ခိုင်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခရီးသွား usb ပျံ့ဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။